शैक्षिक समानताबाट वर्ग विहीन समाजतिर
१२ जेष्ठ २०७७ सोमबार Monday, May 25, 2020
KATHMANDUTemperature 19°CAir Quality93
वर्गभेदको दूरी घटाउने अभ्यास शिक्षाबाटै प्रारम्भ गर्नुपर्छ । आजको निजीकरणको व्यावसायिक अभ्यासमा सय प्रतिशत नै सरकारले निःशुल्क बनाउन नसक्ला तर शिक्षाको गुणस्तरलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।
१४ श्रावण २०७६ मंगलबार
कक्षा पाँचको महेन्द्रमालामा पढेका तीन पाठको मलाई आज पनि सम्झना छ । रविन्सन क्रुसो, एन्डरुक्लस दासको कथा र कुकुरको यात्रा । ती पाठले मलाई भावुक र कल्पनाशील बनाएथे । कालान्तरमा म आख्यान लेखनतिर आकर्षित हुनुमा बाल्यकालका ती पाठको प्रभाव थियो ।
कक्षा सातसम्म मैले पढेको शिक्षालाई पुरानो शिक्षा भनियो । ०२८ देखि नयाँ शिक्षा लागेको थियो । पुरानो शिक्षाका इतिहास, भूगोल, साहित्य, गणित स्तरीय थिए । अंग्रेजी, नेपाली व्याकरण, गणितको ज्ञान कलेजमा पनि सहयोगी बन्न सक्थे ।
नयाँ शिक्षाको पाठ्यक्रम तुलनात्मक रूपमा कमजोर थियो । एसएलसी पास गरिसक्दा पनि कति विद्यार्थी ह्रस्वदीर्घ र काल राम्ररी जान्दैनथे । प्रयोगात्मक शिक्षाको नाममा ल्याइएको नयाँ शिक्षाले न बौद्धिकता सिकायो, न त रोजगारीमूलक बनायो । एकाइ, त्रैमासिक परीक्षाको अंक जोडिँदै गएर उत्तीर्ण हुने पद्धतिले विद्यार्थीमा अध्ययनको गाम्भीर्य हराएर गयो । बहुवैकल्पिकबाट चिह्न लगाउने चलनले लामो उत्तर लेख्ने क्षमता घटाएर लग्यो ।
०४६ पछि शिक्षामा जुन परिवर्तन गरियो, त्यो त झन् के भयो के ! न नयाँ भो, न त पुरानो । निजी विद्यालयको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धासँग दाँजिन नसक्ने सरकारी विद्यालय र विद्यार्थीबीच ठूलो वर्गीय र शैक्षिक खाडल पर्दै गयो । सम्पन्न र विपन्न परिवारका छोराछोरीबीच परिचय पनि हुन छाड्यो । शिक्षाको अव्यवस्थाका कारण देशमा पुरिनै नसक्ने बौद्धिक र वर्गीय खाडलको रचना गर्‍यो । आज छिमेककै नानीहरू एकअर्कामा अपरिचित छन् । यस्तै शैक्षिक व्यवस्था त्यसबेला हुन्थ्यो भने आजका विशिष्ट लेखक, प्राध्यापक सञ्जीव उप्रेतीसँग मेरो कक्षा तीनको चिसो भुइँमा बोरा ओच्छ्याएर पढिरहेको अवस्थामा भेटै हुने थिएन ।
डेढ सय वर्षअघि जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्सले वर्गविहीन समाजको कल्पना गरेका थिए । त्यसको राजनीतिक अभ्यास संसारभरि गरियो, गरिँदै छ । साँच्चैको वर्गविहीन समाज कुनै युगमा पनि सम्भव छैन । वर्गीयताको दूरी भने कम गर्न सकिन्छ । वर्गभेदको दूरी घटाउने अभ्यास शिक्षाबाटै प्रारम्भ गर्नुपर्छ । आजको निजीकरणको व्यावसायिक अभ्यासमा सय प्रतिशत नै सरकारले निःशुल्क बनाउन नसक्ला तर शिक्षाको गुणस्तरलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । जुनसुकै तरिकाले पनि निजी र सरकारी विद्यालयका बालकबीच भेटघाट र संवाद गराउन सक्नुपर्छ ।
मेरा सबै छोराछोरीले नर्सरीदेखि नै निजी विद्यालयमा पढे तर उनीहरूले आफू हुर्किएको समाज चिन्दैनन् । उनीहरू विमानमा उड्छन्, होटलमा बस्छन्, रिजर्भ गाडीमा कुद्छन् । तिनका साथी पनि त्यस्तै छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, तिनीहरूको समाज आफूले देखे/भोगिरहेको जस्तै हो । मेरा साहित्य पनि उति काम लाग्दैन किनकि उनीहरू अंग्रेजी पढ्छन् ।
व्यक्तिवादी बनेको समाजसँग धेरै खाले सामूहिक दायित्व अनुपस्थित हुँदै जानेछन् । त्यस्तो बेला नागरिकभित्र हुनुपर्ने कैयौँ भावुकता नरहन सक्छन्, जसको परिणाम हुन्छ– फेरि कुनै विचार, देश, संस्कृति र धर्मको अनौपचारिक दासताको प्रारम्भ ।
आजको हाम्रो शिक्षाको अवस्थालाई इतिहासतिर फर्काउनु भनेको होइन । तर शिक्षा त्यस्तो पनि नहोस्, जसले हाम्रो भाषा, संस्कृति, राष्ट्रियतालाई नै गौण बनाओस् । संसारभरिका आधुनिकतम ज्ञानका विज्ञ भएर पनि उनले आफ्नोपनलाई नभुलून् ।
पाँच वर्षको अमेरिकी बसाइमा मैले प्रत्येक टोलमा एउटा चर्च पनि देखेँ । सुनेको थिएँ, अमेरिका संसारको सबैभन्दा आधुनिक, वैज्ञानिक र धर्म निरपेक्ष देश हो । विज्ञानको चरम उन्नति गरेर संसारमाथि प्रविधि र शस्त्रले शासन गरिरहेको त्यो मुलुकमा धार्मिक कट्टरता कसरी बाँचिरहेको होला ? यताजस्तो देखिने गरी उनीहरू कट्टर छैनन् तर भित्रभित्रै सामाजिक रूपमा गैरइसाईहरू हीनताबोध गरिरहेका हुन्छन् । त्यहाँको समाजसेवीले आफ्नो सेवाको प्रारम्भ चर्चबाटै सुरु गरेको हुन्छ र प्रत्येक मानिसलाई चर्चमा जान मनोवैज्ञानिक रूपमा प्रेरित गरिन्छ । अन्तरिक्षका एक–एक तारा गनेर फुर्सद नपाएको अमेरिकालाई आज पनि किन त्यति धेरै चर्च र गिर्जा चाहिएको होला ?
बिस्तारै बुझ्दै गएँ । त्यो त उनीहरूको संस्कृति रहेछ, जसलाई निरन्तर जोगाइरहेका छन् । जतिसुकै आधुनिक भए पनि आफ्नो परम्परालाई राज्यले नै अनेक सुविधा दिएर बचाएकै छ । सानैदेखि नानीहरूलाई त्यसको शिक्षा पनि दिइरहेकै छ । हामीले यता उहिले पढाउँदै गरेको नैतिक शिक्षा अचेल कता पुगेको हुँदो हो ?
अमेरिकामा पाँच वर्ष बस्ने क्रममा मैले त्यहाँको माध्यमिक शिक्षालाई नजिकबाट देख्ने मौका पाएँ । हाम्रा छोरा अपूर्व यहाँबाट आठ कक्षा पूरा गरेर त्यहाँ पुग्दा १३ वर्षका थिए । उनलाई त्यहाँ उमेरअनुसार मात्र भर्ना गर्न पाइयो । त्यसमा पनि केही विषयमा पुनः परीक्षा दिनुपरेको थियो । अतिरिक्त कक्षा पनि लिनुपरेको थियो । त्यहाँको माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्दा विद्यार्थी १८ वर्षको हुनुपर्ने भएकाले उमेर गणना गरेर उनलाई कक्षा आठमा राखियो ।
पछि जब पढाइ हुन थाल्यो, मैले उनका पाठ्यपुस्तकबारे चासो राखेँ । सम्पूर्ण पाठ्यसामग्री विद्यालयले नै उपलब्ध गराउने र अधिकांश पढाइ इन्टरनेटका माध्यमबाट हुँदो रहेछ । उनीहरू पुस्तकको भारी बोकेर स्कुल जाँदा रहेनछन् । खेलिरहेका देखिने तिनीहरू पढिरहेका पो हुँदा रहेछन् । पाठ घोक्नेभन्दा प्रायोगिक अभ्यास पठनशैली हुँदो रहेछ । अभिभावक पनि उत्तिकै सक्रिय बनाइन्छन् । विद्यार्थी कक्षाकोठामा पुगेन भने तुरुन्त अभिभावकलाई फोन आइहाल्छ । विद्यार्थीले स्कुलमा कुनै कमजोरी गरे हुलाकबाट जानकारीपत्र आउँछ । जुन विषयमा ऊ कमजोर छ, त्यसबारे अभिभावकलाई जानकारी गराउँदै त्यसका लागि अतिरिक्त निःशुल्क कक्षाको व्यवस्था हुन्छ । विद्यार्थी पढाइमा कमजोर हुनुका कारण खोज्दा घरेलु वातावरणको अनुसन्धान गरिन्छ । विद्यार्थीलाई स्कुलमा भर्ना लिनुअघि नै उसको अलग्गै सुत्ने/पढ्ने कोठा छ/छैन, त्यो निरीक्षण गरिन्छ । उसलाई कुनै पनि प्रकारको तनाव भए त्यसको जवाफदेही अभिभावक हुन्छ ।
त्यहाँ बच्चा १८ वर्षसम्म सरकारले अभिभावकको जिम्मामा दिएको एउटा सरकारी सम्पत्तिजस्तो मानिन्छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन र सुरक्षा जिम्मा सरकारले लिएको हुँदा बाबुआमाको माया पनि सरकारी दायराभित्रै देखिन्छ । विद्यार्थीलाई कुनै विषयमा अनुत्तीर्ण भएर फेरि कक्षा दोहोर्‍याउने छूट छैन । उसले कुनै विषयमा अनुत्तीर्ण भएकै कारण अघिल्लो कक्षामा चढ्न पाउने ढोका बन्द हुँदैन, बरु अघिल्लो कक्षामा पुगेर पनि अनुत्तीर्ण भएको विषयका लागि अतिरिक्त कक्षा लिएर पास हुँदै जानुपर्छ । १८ वर्ष कट्दा उसले कक्षा १२ पनि पूरा गरिसकेको हुन्छ । उसले जस्तो परिणाम ल्याए पनि अब फेरि स्कुलमा हुँदैन ।
माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क र शिक्षाको गुणस्तर उच्च हुने हुँदा सबैजसो नानीहरू सरकारी स्कुल नै जान्छन् । निजी स्कुल पनि हुन्छन् र त्यस्ता स्कुलमा सम्पन्नले मात्र पठाउँछन् । पढाइ मात्र होइन कि विपन्नका लागि स्कुल बस, खाजा र खाना पनि निःशुल्क हुन्छ । राम्रो अंक ल्याई स्कुल पास गरेकालाई कलेजले नै राम्रो सुविधा दिएर बोलाउँछन् । शुल्क तिरेरै पढ्नुपरे पनि शैक्षिक ऋणको व्यवस्था हुन्छ । यस्तो ऋण पढिसकेर जागिर खान थालेपछि ३० वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्छ । त्यहाँ सरकारले अनिवार्य रूपमा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने सुविधाको व्यवस्था गरेको हुन्छ तर कतिले ती सबै सुविधा पाएर पनि पढ्दैनन् । त्यहाँ पनि स्कुल पास नगर्नेको ठूलै जमात भेटिन्छ । ज्ञानका हरेक क्षेत्रमा अमेरिकाले संसारलाई कसरी शासन गरेको छ भन्ने त्यहाँको शिक्षामा सरकारले गरेको लगानी र त्यसबाट प्राप्त उच्च स्तरको जनशक्ति नै हो । सम्पन्नताको जग भन्नु नै शिक्षा हो । नागरिक नै अशिक्षित रहे सरकारले जति नै पैसा खन्याए पनि त्यसले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन ।
हाम्रो देशमा शिक्षालाई महँगो बनाइएको छ । मध्यम स्तरको आर्थिक परिवारका लागि यो अप्राप्यजस्तै छ । खुला बजार अर्थतन्त्रले उपभोक्तालाई आफ्नो क्रयशक्तिअनुसार बजार व्यवस्थापन गरेको हुन्छ । ऊ आफ्नो क्षमताअनुसार किन्न स्वतन्त्र छ । तर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो त हाम्रो देशको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन निजी विद्यालयको योगदान महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रो देशबाट माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेकाहरू संसारका ती अतिविकसित देशमा उच्च अध्ययनका लागि पुगेर तरक्की गरिरहेका छन् । विदेशमा पढिरहेका अधिकांश नेपाली ती देशका विद्यार्थीभन्दा अब्बल देखिने गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो अत्यन्त उच्च स्तरको जनशक्ति तयार भइरहेको छ, विदेशमा । उनीहरू सकेसम्म आफ्नो योग्यतालाई आफ्नै देशमा खर्च गर्न चाहन्छन् । त्यो जनशक्तिलाई यता आकर्षित गर्न सरकार अब तयार हुनुपर्ने भएको छ ।
अमेरिकी नासाका युवा वैज्ञानिक लुजेन्द्र ओझा, जो मंगल ग्रहमा पानी पत्ता लगाउने वैज्ञानिकको टोलीमा थिए । मरेको मान्छेको मुटु जिउँदो मान्छेमा प्रत्यारोपण गर्ने विश्वको पहिलो चिकित्सक डा कुमुद धिताल अस्ट्रेलियामा अध्ययनकै लागि गएका नेपाली विद्यार्थी थिए । साधन, सुविधा र प्रविधिको उपलब्धता भए नेपाली युवा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सक्दैनन् भन्ने छैन ।
हामीले देशको सरकारी विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरलाई निजी विद्यालयसरह नपुर्‍याएसम्म सबै वर्गका बालकको प्रतिभामाथि न्याय हुन सक्दैन । शिक्षाको समानताबाटै वर्गविहीन समाजतिरको यात्रा सुरु हुन्छ ।
सिनेमा, इतिहास र प्रश्नहरू
बोजुबजै, वर्ष ४
समृद्धिको भर्‍याङमा तलै छाडिएका कृष्णबहादुरहरू #Podcast
आपूर्ति शृंखलाको विच्छेदका कारण सिर्जित रोजगारी संकटले गर्दा रोगभन्दा पहिला लाखौँ मानिसहरू...
आपूर्ति शृंखलाको विच्छेदले जन्माएको रोजगारी संकट
रश्मी आचार्यर निराजन मैनाली
६५ वर्षयता अतिक्रमित भूमि फर्काउन नक्सा जरुर महत्त्वपूर्ण छ । अदृश्य भाइरसका कारण गुम्दो म...
यो ढिलाइका लागि धन्यवाद, इतिहासले याद गर्नेछ
कोभिड– १९ महाव्याधि : २१ औँ शताब्दीमा मानिसको जीवन पद्धति जाँच्ने साधन...
जगन्नाथ अधिकारीर प्रमोद पराजुली
खास सन्दर्भबारे ध्यान नदिईकन निरपेक्ष रूपमा बीपी वा महेन्द्रको व्यक्तित्वको कारणले मात्र च...
कालापानी र मिथ्या ज्ञान
नेपालमा अन्यत्रभन्दा ढिलोगरी सिनेमाको विकास भएकाले निर्देशकहरूले इतिहासका घटनामाथि अझै जिम...
देशले गरिब अनि सीमान्तीकृत युवाहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा यति हराएको छ कि तिनले आफ्नो महत्त...